Rita, Writing for My Sake!: riotously!
Posted by Rita at 4/18/2010 10:32:00 PM
အိမ်က ညီမလေးတစ်ယောက်လည်း သွားကြည့်ပြီး ပြန်လာတော့ သိပ်ကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်။ နောက်နှစ်ဆို ကြည့်မယ်လို့ စိတ်ကူးထားတယ်။း)
မမြတ်” အဲဒီ အငြိမ့်ပွဲက ရီခဲ့ရတာ အာညောင်းသွားတာပဲနော်။ မ“ နဲ့အတူကြည့်ခဲ့ရတာ တကယ့်ကို အမှတ်တရပါပဲ။ နောင်နှစ် အခွင့်အရေးရရင် အတူကြည့်ချင်ပါသေးတယ်။
ဘယ်တုန်းက ဘယ်မှာ လုပ်တာလဲဟင်
17th Apr စနေ ညနေကပါ မမ။
နောက် သတင်းရရင် ပြောပါမယ်။
အရမ်း အရမ်းကို ကောင်းပါတယ်။
တချိန်လုံး ပါးစပ်စေ့မနေရအောင် ကောင်းတယ်။
နှစ်လုတ်စာတဲ့ ဘုရား...ဘုရား...။ (အဲလို အစားကြီးလို့ ဝိတ်တက်နေတာ )
တို့တောင် ငါးလုတ် စားရတယ်။
မောင်ကြီးဆီကများ လုစားသလား မသိဘူး။
Thanpayar Thee said...
အေးမြတ်ကိုရေ....ကျွန်တော့်အသံကောင်းတယ်ဆိုလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ....စွယ်တော်ရိပ်ကို feedback ပေးလို့လည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...
အတူလာကြတဲ့ ညီမတွေကလဲ ပြန်ရမှာ ဝေးတော့ ထပြန်လာရတယ်။ မကြည့်ဖြစ်ဘဲ ကျန်သွားတဲ့ အပိုင်းလေးက ဝေဒနာပဲ။ :)
ကိုယ်က အလုပ်ကနေလာတာ ညီ ဆိုတာလဲကြားချင်တယ်။ ကိုယ်က လက်မှတ်ဝယ်ပြီးရင် မကြည့်ရတာများတယ်။ အလုပ်ကပေါ်ပေါ်လာလို့ ဒီတစ်ခါတော့ မရရအောင် ကြည့်မယ်ဆိုပြီးလာတာ။ လာရကျိုးနပ်သွားတယ် ညီရာ။
ကိုယ်သွားမကြည့်တဲ့နှစ်မှ တခြားနှစ်တွေထက် ပိုကောင်းနေသလိုပါပဲလား ... မကြည့်မိတာ နောင်တ အကြီးအကျယ်ရနေပါပြီ ... နောက်နှစ်တော့ ဘာဖြစ်ဖြစ် ကြည့်မည်။ ရှယ်ပေးတာကျေးဇူးပါ ရီတာရေ။ အခွေထွက်ရင်တော့ ၀ယ်ကိုကြည့်ဦးမည်။
ကောင်းပါ့ဗျာ။ ကျွန်တော်တော့ မကြည့်ဖြစ်ပါဘူး။ အားကျတယ်။
အတူပါလာတဲ့ ညီမလေးတွေက woodlands ထိ ပြန်ရမှာဆိုတော့ သိပ်နောက်ကျနေမှာ စိုးတာနဲ့ ပြန်လာခဲ့တယ်။
Thanks for your kind arrangement for my loving daughter.